Kacha rụọ ọrụ nke ọma Ngwongwo Management Channel Markup
atụmatụ » Akara Channel
Tinye akara ngosi na ọnụahịa ezigara na OTA ọ bụla na ntinye akwụkwọ iji nweta otu uru maka ntinye akwụkwọ ọ bụla.
Ndị na-ahụ maka ile ọbịa nke kpebiri ịkesa ngwa ahịa ha site na saịtị ndị ọzọ na-akwụkarị ụgwọ ọrụ. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ụlọ oriri na nkwari akụ nwere ike ikpebi ilo ọnụ ahịa ndị metụtara ya, ndị ọrụ mgbazinye ezumike ezumike na ndị na-arụ ọrụ ụlọ nwere ike ịchọ ịkọwa ọnụahịa ha na ọwa ọ bụla iji mejupụta ọrụ ọzọ ndị ọrụ ahụ na-edebe.
Ọmụmaatụ, mgbe Airbnb naanị ụgwọ 3% maka ndị ọbịa, Expedia n'aka nke ọzọ ebubo 18%. Iji mejupụta ihe dị iche na ọkwa ọrụ a, ọtụtụ ndị agha chọrọ itinye akara site na ọwa mgbe ị na-eji njikwa ọwa.
Kedụ ka Zeevou si Channel Channel Nyere aka?
Zeevou's Onye njikwa Channel na-enye gị ohere ịgbakwunye akara ọwa mgbe ị na-ejikọ OTA ndị ọzọ na nyiwe ntinye akwụkwọ. Cannwere ike ịgbakwunye ma ọ bụ pasent ma ọ bụ ọnụọgụ ego kwa abalị kwa channel, ma ọ bụ ịnwere ike iji nchikota ha abụọ. Nke a na-enye ndị nnabata ohere ị nweta otu ego ahụ na azụ akwụkwọ ọ bụla, n'agbanyeghị ebe ntinye akwụkwọ si abịa.
N'aka ozo, iji n'ọkwá Njirimara, ndị ụsụụ ndị agha nwere ike iwelata ọnụego ndị a kpọsara na weebụsaịtị ha maka oke uru dị elu nke ha nwere ike ịla azụ ndenye aha. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmachi ndị ahịa nke ga - erite uru site na ego dị otu a iji dọọ ndị na - egwu egwu, ị nwere ike inye ha Koodu ego a ga-abata site na ndị ọbịa na nlele-na-na-erite uru si kwuru ego.
Iji nyere ndị ọbịa aka na-arụ ọrụ na ikike ebe iwu oke ego dị, Zeevou emepela atụmatụ metụtara inwe ike ijikwa ọtụtụ atụmatụ ọnụego maka otu ụdị. Yabụ ị nwere ike ịhọrọ kesaa ụfọdụ na webụsaịtị ịdebanye aha gị kpọmkwem, na-etinye usoro dị iche iche na ntinye akwụkwọ ka ị ghara ịdaba na mmachi mgbochi nke nkwekọrịta ha na OTA nwere.